सुनको मूल्य इतिहासकै महँगो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? - Everest Dainik - News from Nepal
सुनको मूल्य इतिहासकै महँगो, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
काठमाडौं, साउन २३ । दैनिक जसो बढेको सुनको मूल्यले आज रेकर्ड तोडेको छ । बिहीबार सुन प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताहरु यतिबेला सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ आज?
अन्य क्षेत्रको लगानी राम्रो हुने नदेखिएपछि लगानीकर्ताहरु सुनतर्फ आकर्षित भएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यता चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी ८ सय २५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको छ ।
फेडेरल रिजर्भ बैंकले ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले कमी गरेको, चीन र अमेरीकाको व्यापार युद्ध, इरान अमेरीकको मुद्दा जस्ता विषयले सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेको सुनचाँदी व्यवायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।
ट्याग्स: रेकर्ड, सुन